မြန်မာ့ဓလေ့ကို ကမ္ဘာ့အလယ် မှာ ဖော်ပြ တော့မယ့် MISS UNIVERSE MYANMAR သူဇာဝင့်လွင်ရဲ့ချစ်စရာမြန်မာ့ရိုးရာ သူငယ်တော်ဝတ်စုံ – Cele Oscar
မြန်မာ့ဓလေ့ကို ကမ္ဘာ့အလယ် မှာ ဖော်ပြ တော့မယ့် MISS UNIVERSE MYANMAR သူဇာဝင့်လွင်ရဲ့ချစ်စရာမြန်မာ့ရိုးရာ သူငယ်တော်ဝတ်စုံ
ဘယျတော့မှလဲကမြသှားဘဲ ပဈလိုကျတိုငျးထောငျ နတေဲ့ မွနျမာ့ရိုးရာ ကစားစရာအရုပျလေး ပဈတိုငျးထောငျ ရဲ့အနှဈသာရကို ဒီနှဈရဲ့ Miss Universe စငျမွငျ့ထကျမှာ မွနျမာ ကိုယျစားပွု အလှမယျ သူဇာဝငျ့လှငျက ဖျောပွတော့မှာပါ။ ရညျရှယျခကျြ ကောငျးတှရှေိတဲ့ဒီအရုပျလေးကို မွနျမာတငျမက ကမ်ဘာကပါအသိအမှတျပွုပွီး စိတျဝငျစားမှု ခံရတော့မှာ အသအေခြာပါပဲ။ဒီဝတျစုံလေးကို National Costume အဖွဈနဲ့ ပှဲထုတျဖို့စီစဉျထားပမေယျ့ လကျရှိအခြိနျထိ Candy လကျထဲမရောကျ လာသေးပါဘူး။ ဒီအကွောငျး ကိုလညျး ” ၅.၅. ၂၁ – DHL Agent မှ ရနျကုနျ တှငျပစ်စညျးလာယူ ၆.၅. ၂၁ – ရနျကုနျမှ မွဝတီသို့ပို့ဆောငျ ၇.၅. ၂၁ – မွဝတီမှ မဲဆောကျသို့ပို့ဆောငျ ၈.၅. ၂၁ – မဲဆောကျမှ DHL ဖွငျ့ အမရေိကနျ နိုငျငံသို့စတငျပို့ဆောငျ ၉.၅. ၂၁ – ဘနျကောကျ – ဟောငျကောငျ – ဂြာမဏီ မှတဈဆငျ့ နယူးယောကျသို့ရောကျရှိ ၁၀.၅. ၂၁ – နယူးယောကျ တှငျ ကွားဖွတျထုတျယူပွီး လူကိုယျတိုငျ ဖလျောရီဒါသို့ပို့ဆောငျနိုငျရနျ ဆောငျရှကျရာတှငျ မူလလိပျစာပေးထားသညျမှာ ပွိုငျပှဲကငျြးပရာ ဖလျောရီဒါ လိပျစာဖွဈသဖွငျ့ ကွားဖွတျ ထုတျယူ၍မရကွောငျးသိရှိရ၊
ယနညေ့ ၉ နာရီ လယောဉျဖွငျ့ တငျပေးလိုကျမှာဖွဈတဲ့ အတှကျ သူတို့ပို့တာ ကိုမစောငျ့ဘဲ ဖလျောရီဒါရုံးတှငျ ကိုယျတိုငျ သှားရောကျထုတျယူမညျ ဖွဈကွောငျးညှိုနှိုငျးဆောငျရှကျ ၁၁.၅. ၂၀ – ဖလျောရီဒါတှငျ သှားရောကျထုတျယူရာ၌ မရောကျသေးကွောငျးသိရ၊ နယူးယောကျရုံး သို့ထပျမံစုံစမျးရာ ပစ်စညျးရောကျမလာသေးကွောငျးသိရ၍ လဆေိပျသို့လိုကျသှားပွီး အကြိုးအကွောငျး အားရှငျးပွ၍ စုံစမျးညှိနှိုငျး ရာ လဆေိပျကှနျတိနျနာ ထဲသို့ရောကျနကွေောငျး ယခုညလယောဉျဖွငျ့ ပို့ဆောငျမညျ ဖွဈကွောငျးပွောကွားသဖွငျ့ ဖလျောရီဒါ တှငျသှားရောကျထုတျယူရနျ အဆငျသငျ့ စောငျ့ဆိုငျးလြှကျရှိ ၁၂. ၅. ၂၀ – လယောဉျနှငျ့ ပါ မပါ စုံစမျးရာတှငျ နယူးယောကျမှာပငျရှိနသေေးကွောငျးသိရသညျ့အတှကျ အခြိနျမီ မရောကျရှိပါက အစားထိုး ဝတျဆငျယှဉျပွိုငျရနျဝတျစုံ ရရှိရေးနှငျ့ လူကွုံထညျ့ပေးနိုငျရေး ဆောငျရှကျလြှကျ ရှိပါသညျ။ ” ဆိုပွီး Miss Universe Myanmar Organization က ဖွရှေငျးထားခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာ့ရိုးရာဝတျစုံတဈခုဖွဈတဲ့ သူငယျတျောဝတျစုံ နဲ့ မွနျမာ့ရိုးရာအရုပျတဈခု ဖွဈတဲ့ ပဈတိုငျးထောငျ လေးတို့ရဲ့ ပူးတှဲတငျဆကျမှုကို Miss Universe စငျမွငျ့ထကျမှာ မွနျမာပွညျသူ ပွညျသားအားလုံးက မွငျတှခေ့ငျြကွပါတယျ။ ဝတျစုံအခြိနျမီရောကျသှားပွီး မွနျမာ တို့ရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ရိုးရာဓလတှေ့ကေို ကမ်ဘာ့အလယျမှာ ခပြွနိုငျဖို့လညျး အားလုံးက မြှျောလငျ့နကွေပါတယျ။ Candy ရဲ့ကွိုးစားမှုကတော့ မကျြစိမှိတျပွီး ယုံကွညျရနိုငျတာမို့ ဝတျစုံလေးအခြိနျမီရောကျသှားပွီး ပှဲမှာအဆငျပွပွေနေဲ့ ရိုးရာယဉျကြေးမှုကို အကောငျးမှနျဆုံးခြ ပွနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျ။
ဘယ်တော့မှလဲကျမသွားဘဲ ပစ်လိုက်တိုင်းထောင် နေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ကစားစရာအရုပ်လေး ပစ်တိုင်းထောင် ရဲ့အနှစ်သာရကို ဒီနှစ်ရဲ့ Miss Universe စင်မြင့်ထက်မှာ မြန်မာ ကိုယ်စားပြု အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်က ဖော်ပြတော့မှာပါ။ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းတွေရှိတဲ့ဒီအရုပ်လေးကို မြန်မာတင်မက ကမ္ဘာကပါအသိအမှတ်ပြုပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ခံရတော့မှာ အသေအချာပါပဲ။ဒီဝတ်စုံလေးကို National Costume အဖြစ်နဲ့ ပွဲထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိ Candy လက်ထဲမရောက် လာသေးပါဘူး။ ဒီအကြောင်း ကိုလည်း ” ၅.၅. ၂၁ – DHL Agent မှ ရန်ကုန် တွင်ပစ္စည်းလာယူ ၆.၅. ၂၁ – ရန်ကုန်မှ မြဝတီသို့ပို့ဆောင် ၇.၅. ၂၁ – မြဝတီမှ မဲဆောက်သို့ပို့ဆောင် ၈.၅. ၂၁ – မဲဆောက်မှ DHL ဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံသို့စတင်ပို့ဆောင် ၉.၅. ၂၁ – ဘန်ကောက် – ဟောင်ကောင် – ဂျာမဏီ မှတစ်ဆင့် နယူးယောက်သို့ရောက်ရှိ ၁၀.၅. ၂၁ – နယူးယောက် တွင် ကြားဖြတ်ထုတ်ယူပြီး လူကိုယ်တိုင် ဖလော်ရီဒါသို့ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မူလလိပ်စာပေးထားသည်မှာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ဖလော်ရီဒါ လိပ်စာဖြစ်သဖြင့် ကြားဖြတ် ထုတ်ယူ၍မရကြောင်းသိရှိရ၊
ယနေ့ည ၉ နာရီ လေယာဉ်ဖြင့် တင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ပို့တာ ကိုမစောင့်ဘဲ ဖလော်ရီဒါရုံးတွင် ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ထုတ်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်းညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက် ၁၁.၅. ၂၀ – ဖလော်ရီဒါတွင် သွားရောက်ထုတ်ယူရာ၌ မရောက်သေးကြောင်းသိရ၊ နယူးယောက်ရုံး သို့ထပ်မံစုံစမ်းရာ ပစ္စည်းရောက်မလာသေးကြောင်းသိရ၍ လေဆိပ်သို့လိုက်သွားပြီး အကျိုးအကြောင်း အားရှင်းပြ၍ စုံစမ်းညှိနှိုင်း ရာ လေဆိပ်ကွန်တိန်နာ ထဲသို့ရောက်နေကြောင်း ယခုညလေယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသဖြင့် ဖလော်ရီဒါ တွင်သွားရောက်ထုတ်ယူရန် အဆင်သင့် စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိ ၁၂. ၅. ၂၀ – လေယာဉ်နှင့် ပါ မပါ စုံစမ်းရာတွင် နယူးယောက်မှာပင်ရှိနေသေးကြောင်းသိရသည့်အတွက် အချိန်မီ မရောက်ရှိပါက အစားထိုး ဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဝတ်စုံ ရရှိရေးနှင့် လူကြုံထည့်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ ” ဆိုပြီး Miss Universe Myanmar Organization က ဖြေရှင်းထားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သူငယ်တော်ဝတ်စုံ နဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာအရုပ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ပစ်တိုင်းထောင် လေးတို့ရဲ့ ပူးတွဲတင်ဆက်မှုကို Miss Universe စင်မြင့်ထက်မှာ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးက မြင်တွေ့ချင်ကြပါတယ်။ ဝတ်စုံအချိန်မီရောက်သွားပြီး မြန်မာ တို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရိုးရာဓလေ့တွေကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ချပြနိုင်ဖို့လည်း အားလုံးက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ Candy ရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီး ယုံကြည်ရနိုင်တာမို့ ဝတ်စုံလေးအချိန်မီရောက်သွားပြီး ပွဲမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို အကောင်းမွန်ဆုံးချ ပြနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဓမ္မဘက်က ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ သူတွေအတွက် ဆုတောင်း စကားလေး ဆိုလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…..
ပြည်သူတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမည့် ထားထက်ထက်…..